My Blue Sky | What is Forced Marriage – Nepali
आकस्मिक अबस्था हुँदा सधैँ 000 मा फोन गर्नुहोस्। Locker Room Login
बलजफ्ती विवाह भनेको के हो?
म मेरो साथीको बारेमा चिन्तित छु।
बलजफ्ती विवाह के हो?
यदि तपाई बलजफ्ती विवाहमा फस्नु भएको छ वा विवाहको लागि बाध्य गराइँदैछ भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ भने, कृपया मद्दत उपलब्ध छ र तपाई एक्लै हुनुहुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनुहोस्। तपाई डराउनुभएको वा आफ्नो भविष्यप्रति अनिश्चित हुनु हुन्छ होला। तपाई आफ्नो भावना तथा कर्तव्यका बारेमा अन्योलमा हुनु होला र अब के गर्ने भन्नेसम्बन्धमा अनविज्ञ हुनु होला। केही मद्दत तथा सहायता प्राप्त गर्नका लागि तपाईले यस पृष्ठमा भएका नम्बरहरुमध्ये एउटामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
जब कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता र पूर्ण सहमतिविना विवाह हुन्छ त्यो बलजफ्ती विवाह हो। यस्तो हुन सक्छ किनभने उनीहरुले वैवाहिक समारोहको प्रकृति तथा प्रभावलाई बुझ्दैनन् वा उनीहरुको परिवारबाट भावनात्मक दबाब, धम्की, वा वास्तविक शारीरिक चोट दिने, वा कसैसँग छलकपटपूर्ण तरिकाले विवाह गराउन उनीहरुलाई धम्की, त्रास देखाउने वा छल गरिन्छ। यदि विवाहको समयमा कुनै व्यक्ति १६ वर्षमुनिको उमेर छ भने, उनीहरुलाई सामान्यतया स्वतन्त्र तथा पूर्णरुपमा विवाहको लागि योग्य भएको मानिँदैन। मानिस तथा परिवारहरुमा यस किसिमको विवाहको दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्छ र अष्ट्रेलियामा यो कानुनविपरीत हुन्छ।
अष्ट्रेलियाको कानुनबारे थप जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
मार्च २०१३ मा बलजफ्ती विवाहलाई अष्ट्रेलियामा गैरकानुनी बनाउँदै एउटा कानुन प्रभावमा आयो। व्यक्तिलाई बलजफ्ती विवाहमा प्रवेश गराउने कारक हुनु वा बलजफ्ती विवाहको पक्षमा हुनु यो एउटा अपराध हो (तपाई पीडित हुनुहुन्न भने)। यो कानुनलाई कमनवेल्थ क्रिमिनल कोड एक्ट १९९५ (Commonwealth Criminal Code Act 1995) को खण्ड २७० मा समावेश गरिएको छ। यस्ता अपराधलाई अधिकतम ७ वर्षसम्मको जेल सजाय, वा गम्भीर अपराधका लागि ९ वर्षसम्म सजाय हुन्छ, जसमा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई विवाह गर्न बाध्य बनाउने वा अपांगता भएको व्यक्तिलाई विवाह गर्नका लागि दबाब दिनेलगायतका पर्छन्। यदि १८ वर्षमुनिका उमेरका बालबालिकालाई कसैले अष्ट्रेलियाबाहिर विवाह गर्नका लागि लैजाने बन्दोबस्त गर्न सहयोग गर्छ भने उनीहरुलाई २५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ।
यदि तपाई बलजफ्ती विवाहमा परेको भए
… वा तपाईलाई विवाहको लागि बाध्य गराइँदैछ भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ भने, कृपया मद्दत उपलब्ध छ र तपाई एक्लै हुनुहुन्न भन्ने कुरा थाहा पाउनुहोस्। तपाई डराउनुभएको वा आफ्नो भविष्यप्रति अनिश्चित हुनु हुन्छ होला। तपाई आफ्नो भावना तथा कर्तव्यका बारेमा अन्योलमा हुनु होला र अब के गर्ने भन्नेसम्बन्धमा अनविज्ञ हुनु होला। केही मद्दत तथा सहायता प्राप्त गर्नका लागि तपाईले यस पृष्ठमा भएका नम्बरहरुमध्ये एउटामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
बलजफ्ती विवाहका उदाहरणहरु
१. ”एक १७ वर्षकी केटीको केटासाथी (प्रेमी) थियो तर उनका आमाबाबुहरुले उनलाई भने कि त्यस केटालाई भेट्न छोड्नुपर्छ र अर्कै केटासँग विवाह गर्नुपर्छ। उनलाई यो पनि भनियो कि यदि अर्कै केटासँग उनले विवाह गर्न मानिनन् भने उनलाई चोट पुर्‍याइनेछ। यदि ती केटीले आफूलाई चोट पुग्ने डरका कारण विवाहका लागि अगाडि बढ्छिन् भने यो एउटा बलजफ्ती विवाह हो।”
२. ”एक १५ वर्षकी केटीलाई भनिन्छ कि उनी विद्यालयको बिदाको समयमा पारिवारिक छुट्टी मनाउन जाँदैछिन्। जब उनी तथा उनका परिवार बिदेश आइपुग्छन् उनलाई एक कजन (भान्जा) सँग विवाह गर्नैपर्ने बताइन्छ। उनलाई भनिन्छ कि यदि उनी विवाह गर्न राजी भइनन् भने उनलाई कहिले पनि अष्ट्रेलिया फर्कन दिइने छैन। यदि यो विवाह अघि बढ्यो भने त्यो बलजफ्ती विवाह हुन्छ।”
३. ”एक १९ वर्षको केटाले उसको परिवारलाई भन्छ कि ऊ समलिंगी हो। केही हप्तापश्चात उसले समुदायभित्रको वर्षौँदेखि चिनेको एक जवान महिलालाई बिहे गर्नुपर्ने उसको परिवारले बताए। त्यो विवाह अगाडि बढ्छ किनभने उसलाई भनियो कि यदि उसले विवाह गरेन भने परिवारमा यति धेरै शरम हुन्छ कि उसको हजुरआमालाई त हृदयाघात नै हुने सम्भावना छ। यो बलजफ्ती विवाह हो।”
मागी विवाह के हो?
केही परिवारहरुमा, मागी विवाह हुन्छ। जोडीलाई परिवार सदस्य वा अरु व्यक्तिद्वारा एकआपसमा परिचित गराइन्छ। दुवै जनाले विवाह गर्न चाहने वा नचाहने स्वतन्त्रतापूर्वक रोज्न सक्छन् र उनीहरुका परिवारले विना परिणाम उनीहरुको रोजाइलाई सुन्छन्। १८ वर्ष कटेका मानिसहरुका लागि मागी विवाह अष्ट्रेलियामा कानुनी हो किनभने जोडीले तब मात्र विवाह गर्छन् जब दुवैले स्वतन्त्रतापूर्वक एकअर्कालाई विवाहका लागि छान्छन्।
शुरुमा उनीहरु विवाहका लागि राजी भएता पनि मागी विवाह बलजफ्ती विवाहमा परिणत हुन सक्छ यदि एक वा दुवै मानिसलाई धम्क्याइयो, फसाइयो वा विवाहमा राजी हुनका लागि दबाब दिइयो भने। व्यक्तिले विवाहका लागि नाइँ भन्दा निरीह अनुभव गर्न सक्छ। यस्तो समयमा उनीहरुले पूर्ण तथा स्वतन्त्र सहमति दिँदैनन् र त्यो विवाह बलजफ्ती विवाह हुन पुग्छ।
मागी विवाहको उदाहरणका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
एक १९ वर्षको व्यक्तिलाई उसको सम्भावित वैवाहिक जोडीसँग परिवार सदस्य, साथी वा अन्य तेस्रो पक्षद्वारा चिनाइन्छ। उक्त व्यक्तिले विवाहका लागि राजी हुन वा नाइँ भन्न सक्छ। यदि उनीहरुले विवाहका लागि नाइँ भन्ने निर्णय गरे भने यो विवाह अगाडि बढ्दैन। यदि उनीहरुले आफ्नो पूर्ण तथा स्वतन्त्र सहमतिमा विवाहलाई ‘हुन्छ’ भनेमा विवाह अगाडि बढ्छ। उनीहरुको पूर्ण तथा स्वतन्त्र सहमतिको अर्थ हुन्छ विवाहलाई हुन्छ भन्नुमा त्यहाँ कुनै धम्की, जालसाँझी वा दबाब थिएन।
कम्प्युटर तथा फोन सुरक्षा
तपाई सुरक्षित स्थलमा भएको सुरक्षित फोन वा कम्प्युटर प्रयोग गरेको ता कि तपाईलाई कसैले पछ्याउन वा नियाल्न नसकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाई आफ्नो सुरक्षाका विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईले साथीको मोबाइल फोन सापट लिन सक्नुहुन्छ वा सार्वजनिक पुस्तकालय वा सामुदायिक केन्द्रको कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईलाई यो वेबसाइट तुरुन्त छोड्नुपर्यो भने यस पृष्ठको माथि दायाँ कुनामा रहेको “वेबसाइटबाट बाहिरिनुस्” (”exit website”) बटनमा थिच्नुहोस्। यसले तपाईलाई सीधै खाली Google खोजी पृष्ठमा लैजान्छ तर यसले तपाईको ब्राउजर हिस्ट्रीलाई मेट्दैन।